Umkhiqizi nomhlinzeki we-Double Double USB Car Ishaja | BWOO
• Ihambisana nayo yonke ikhebuli yokushaja ye-USB, i-compact compact
• Ikhwalithi yomkhiqizo omuhle
• I-compact compact, incanyana kunesithupha sakho
• Amalambu e-LED akwazisa uma amadivayisi axhunyiwe ashaja
• Usayizi omncane nokuklanywa okuhlukile
• Ngokuvikelwa kwamandla kagesi, wamanje, nokuvuza
1. Uzokwazi ukuthi ukushaja "kuyaqhubeka" ngenkomba ye-LED.
2. Ukuhambisana jikelele kusho ukuthi ungashaja noma iyiphi i-smartphone: i-Apple, iHuawei, i-Samsung, i-LG, i-Google nokuningi.
3. Amandla amaningi okushaja ngasikhathi sinye ukushaja amadivayisi amabili.
4. Gcina ideshibhodi yemoto yakho ibushelelezi ngomklamo omuhle omhlophe.
Shaja ngokushesha amadivayisi amabili ngasikhathi sinye
Ishaja yemoto ephindwe kabili ye-BWOO inezimbobo ezimbili ze-USB A, ekuvumela ukuthi ukhokhise kalula amadivayisi amaningi ngasikhathi sinye, le charger yemoto inikeza amandla ahlanganisiwe ama-watts ayi-12, nge-1amp port eyodwa, enye itheku 2.4 amps ukushaja amadivayisi akho ngokushesha nangokuphepha , ishaja ixhuma ngqo ethekwini lokushaja lemoto yakho, futhi isibonakaliso se-LED siyakhanya ukukwazisa uma amadivayisi wakho eshaja.
Isebenzisana ne-Universal ukusebenza nganoma iyiphi ikhebula le-USB A
Amachweba weshaja yemoto ephindwe kabili e-USB atholakala yonke indawo, akuvumela ukuthi ubhanqe nayo nganoma iyiphi ikhebula le-USB A, inqobo nje uma unentambo ehambisanayo, ungasebenzisa ishaja ngama-smartphone, amaphilisi, amakhamera, amaphakethe webhethri aphathekayo, isipikha se-bluetooth, i-smartwatch kanye Okuningi. Futhi ngokwakhiwa kwayo okuhlangene, ishaja lingena kalula kubhakha, esikhwameni semali, noma kubhokisi lamagilavu.
Ukuphepha ngomsebenzi wokusika okuzenzakalelayo
Le shaja yemoto ephindwe kabili ye-USB eyakhelwe ngaphakathi ku-chip yokuqinisekisa ukushaja okuphephile ngenkathi ishaja amadivayisi akho, ishaja izonqanyulwa ngokuzenzekelayo ngoba amadivayisi akhokhiswe ngokugcwele, njalo gcina amadivayisi wakho weselula kwisikhunta sokushaja esiphephile.
I-BO-CC16 igcwele ibhokisi lephepha lokuthengisa + ibhamuza elinama-hook up, ungabona ishaja ngokucacile kusuka ebhokisini lokwakhiwa kwewindi.
2. Uma ubhema, ishaja yemoto ingangena esikhungweni esibonakalayo sikagwayi nganoma yisiphi isikhathi, ukuze ukwazi ukubhema osikilidi abambalwa futhi ugcine izinga lomoya emotweni!
Langaphambilini Isitolo esidayisa yonke impahla China Ishaja Yemoto Ishaja Isiphathi Samafekthri - ama-multi USB car charger - Wusen
Olandelayo: ishaja yefoni engenantambo yemoto